Vamwe Voenzanisa Kubvutwa kweMasimba neMauto kuMali neZvakaitika muZimbabwe 2017
Vamwe vana veZimbabwe vakapembera pakapindira mauto mukubviswa kwevaive mutungamiri wenyika, VaRobert Mubage pachigaro nemauto muna 2017.
Vanhu vakawanda muAfrica nepasi rose vari kutevera nemaziso matsvuku zviri kuitika munyika yeMali, uko mauto akabvisa mutungamiri wenyika iyi, VaIbrahim Boubacar Keita, pachigaro nemusi weChipiri uye kumusunga pamwechete nemutungamiri wehurumende yake VaBoubou Cisse nemamwe makurukota ehurumende.
Izvi zvinonzi zvakatanga mushure mekunge chikwata chemauto chakatora nechisimba akamba yemauto ye Kati iri makiromita gumi nemashanu kubva muguta guru renyika iyi re Bamako.
Mauto aya akazofora achipinda muguta guru umo akasvikosunga mutungamiri wenyika nevamwe vake pamwe nekuumanikidza kuti asiye basa.
VaKeita vakabuda panhepfenyuro yenyika iyi vachizivisa kuti vakanga vosiya basa senzira yekudzivirira kudeuka kweropa.
Masangano akawanda kusanganisira sangano rinoona nezvekugadzikana munyika dzepasi rose reUnited Nations Security Council, European Union, sangano reAfrican Union, pamwe nere Economic Community of West African States (Ecowas) iro Mali iri nhengo akatozivisa nezvekusatambira kwawo kubvutwa kwemasimba uku nemauto.
Sangano reAfrican Union neChitatu rakamisa Mali kuve nhengo yesangano iri nekuda kwechiitiko ichi.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, VaMike Pompeo vakazivisawo kuti nyika yavo iri kubatana nemasangano eAfrican Union neECOWAS mukushoropodza zvakaitika neChipiri muMali.
Sachigaro veAfrican Union vari mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, vakakurudzirawo kudzoserwa kwehutongo hweveruzhinji nekukasika.
Mutungamiri weFrance, VaEmmanuel Macron vakakurudzirawo kudzoswa kwehutongo hwejekerere munyika iyi.
Pave nemaonero akasiyanasiyana pakubvutwa kwemasimba mu Mali nemauto nekubvutwawo kwemasimba nemauto muZimbabwe, vamwe vachiti masangano ari kubuda paachena achishoropodza zviri kuitika kuMali aifanirwa kuita zvimwechete muZimbabwe muna 2017, apo mauto akabvisa vaive mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe pachigaro pamwe nekuvamanikidza kusiya chiogaro.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party, Doctor Urayayi Zembe, vanoti pane kufanana kezvakaitika kuMali nezvakaitika muZimbabwe muna 2017, zvikuru panyaya yehuwori nekubirwa kwesarudzo.
Vanoti zviviri izvi zvakafanana uye ndizvo zvakasimudza kuti munyika mbiri idzi mauto atungamire mukubviswa kwehutungamiri.
Asi Doctor Zembe vanoti musiyano uripo chete ndewekuti muZimbabwe veruzhinji vakapinda mumigwagwa mushure mekuridzirwa huwi nemauto pamwe nevesangano revakarwa hondo yerusununguko kuti vanhu vauye vatsigireVaMugabe vabve pachigaro.
Izvi zvinotsinhirwa nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZanu PF, Doctor Simba Mavaza, avo vanoti vanhu vari kuenzanisa Zimbabwe neMali havasi kunzwisisa zvakaitika.
Vanoti nyaya yekuMali inyaya yemauto akabvisa mutungamiri pachigaro isina vanhu mukati uye paramende yeMali haina kugara kuti itorere matanho mutungamiri wenyika, VaKeita kuti vadzingwe kana kuti varegedze basa sezvakaitika muZimbabwe.
Doctor Mavaza vanoti VaMugabe vakabviswa pachigaro nebato ravo, iro rakazoshevedza vaive mutewedzeri wemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuti vadzoke munyika mushure mekunge vatizira kuSouth Africa.
Vanotiwo VaMugabe havana kumbobvira vasungwa nemauto sezvakaitika kuMali uko VaKeita vakaiswa muhusungwa nemauto.
Hurukuro naDoctor Urayayi Zembe pamwe naDoctor Simba Mavaza